China Die vachikanda lapel pini fekitori uye vagadziri | Kingtai
Zvidimbu zvakakosha Yedu yekufa-yakakanda tsika lapel pini inogona kupedzwa pane inopenya kana yakakosha pamusoro.
Aya mapini emachira ane 3D dhizaini simulation yeyako mareferensi uye anozoratidza 3D mifananidzo yemabheji ako
Aya mapini ane yavo yakasarudzika dhizaini dhizaini, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kugadzira chigadzirwa.
Mhando dzakasiyana dzemhizha dziripo, kusanganisira kuwedzera yakajeka enamel mavara.
Tsika dzemapepa pini dzakagadzirwa neinc kana pewter uye dzinoitwa uchishandisa nzira yekunyungudika.
Iyo simbi inopisa muchimiro chemvura, inodururwa muforoma, uye inogadzirwa nekutenderera kukanda.
Nguva yekugadzira: 15-20 anoshanda mazuva mushure mekuongororwa kwehunyanzvi.
Kutsvaga tsika dzakarukwa mapini?
Kambani yedu inogona kuburitsa 3D kukanda lapel pini!
Kukanda pini kunopa multirelief iyo isingawanzo kuwanikwa kuburikidza neyakajairwa tsika nzira.
Panzvimbo pekungova nenzvimbo imwe chete yakasimudzwa uye imwe yekudzora nzvimbo (senge mune 2-D lapel pini dhizaini), urwu rudzi rwekuveza zvirinani kuratidza nzvimbo dzenzvimbo, ichigadzira yakaoma mapurani ekunyora uye ruzivo rwezviso, maumbirwo nemhuka.
Kufa uchikanda. Kufa kwekukanda mapini kunoitwa kubva kukanda kwete kubva kune yekutsika maitiro.
Iyo fomu inoumbwa uye simbi yemvura inodururwa muforoma kugadzira pini yekufa.
Nekuti maitiro aya anodhura, kana kucheka kusingade zviri nani kusarudza tsika yakapfava enamel kana tsika yakaoma enamel tsono.
Tsika kufa-kukanda pini Ndeipi tsika yekufa-ichikanda pini?
Kufa kwekukanda mapini kwakasarudzika chaizvo nekuti chimiro hachinetsi.Ingaite chero chimiro chinodiwa nemutengi.Iinogona kugadzirwa nekucheka kutenderedza tsamba, gomba pakati pembambo, mune yakakosha pateni, kana chero imwe element yaunoda.
Dzinogadzira zvimiro zvakaomarara uye dhizaini nekugadzira iyo tsika tsika uye nekujovera yakanyungudutswa zinc alloy simbi. Iyo simbi inoomesa kana ikatonhora. Zinc chiwanikwa chinhu chakasimba kwazvo nekuti hachikotamire kana kupaza uye hachichipa. Chakasimba uye Kuwedzera kune, yakapepuka kupfuura yendarira kana simbi uye inoshandiswa pini yekufa.
Iyo yekufa ichikanda tsono inogona kusarudzwa mune yese sirivheri, yese goridhe, kana chero imwe simbi ruvara.
Iwe unogona kusarudza yakapfava kana yakaoma enamel kubva kune yakazara yakazara renji yePantone kana PMS mavara, uye isu tine akasiyana mavara kadhi KADZIDZO aunosarudza kubva pane zvirinani kuburitsa yakanyatso kukwana, ine simba chigadzirwa, saka inoratidzika yakafanana chaizvo yakafanana neforoma jekiseni.
Kufa kukanda tsono kunopa mukana wakazara wekushanduka muchigadzirwa, zvichibvumira zvimiro zvetsika mukugadzirwa nenhamba isingagumi yemamwe mabhenefiti - ese emahara
Vatengi vazhinji vanoshandisa kufa vachikanda pini nekuti ivo vanoda kuratidza yakaoma dhizaini kana logo mhedzisiro, teedzera yepamusoro mhando neanoonekwa maficha, uye inoda kusona.
Kana ivo vangangoda pini ine yakaoma kana isina kujairika chimiro.
Ivo vanoda zvakasarudzika zvigadzirwa.
Kazhinji, kufa - kukandwa mapini kunorayirwa kana iwo akakura kupfuura maviri masendimita muhukuru.
Nekuti maitiro ekugadzira kufa anonyanya kuomarara kupfuura maitiro ekugadzira pini yekufa nesimbi yekudhinda, iwo anodhura zvakanyanya.
Asi kunyangwe zvakadaro, mutengo unosiyana zvichienderana nesaizi uye huwandu hweodha yacho.
Tinogona kuishandura kuita basa rehunyanzvi kuburikidza neyako dhizaini pfungwa kana pfungwa yeyedu nyanzvi dhizaini, uye nekumisikidza iyo chete kune chako chigadzirwa.
PinProsPlus haibhadharisi imwe mari.
Pashure: Akarembera Lapel Pins
Zvadaro: Kufa kwakanamatira lapel pini